दार्जिलिङलाई दिल्लीको फेरि अर्को आश्वासन - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारदार्जिलिङलाई दिल्लीको फेरि अर्को आश्वासन
दार्जिलिङलाई दिल्लीको फेरि अर्को आश्वासन
ममता व्यानर्जीसमेतले भाजपाले गोर्खालाई केवल ‘आश्वासन’ दिएको भन्दै भाजपाले ‘आश्वासन’ दिने तर काम भने नगर्ने भन्दै बङ्गालभरि विमललाई देखाउँदै प्रचार गरिरहेको बेला फेरि पहाडका गठबन्धनका दलहरूलाई केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले ‘आश्वासन’ नै दिएका छन्। विमल भाजपाको आश्वासनले वाक्कै बनेर ममता अघि झुक्न बाध्य बनिसकेका छन्। विधानसभा चुनाउ अघि स्थायी राजनैतिक समाधान नगरेपनि पहाडका जनता र दलहरू 11 वटा जातलाई जनजातिको मर्यादा त देला भन्ने आशामा छन्। यस्तोमा चुनाउसम्मै ‘आश्वासन’ मात्रै अघि आयो भने यसपल्ट स्पष्ट छ, पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खाले भाजपालाई विदा दिने निश्चित छ। यस्तो भयो पनि गठबन्धनका दलहरूमाथि जनताको भरोसा सँधैलाई उठ्ने पनि निश्चित छ।
आखिरमा सांसद राजु विष्टले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई दिल्ली लगेर सावित गरे, यो काम अहिलेसम्म विमल गुरुङले हुनै दिइरहेका थिएनन्। जस्तो विमल गुरुङ गठबन्धनबाट निस्किए, उस्तै विष्टले गठबन्धन दलका नेतृत्वलाई दिल्ली पुऱ्याए।
यही काम विमल गुरुङले दिल्लीमा बसेर सांसद राजु विष्टलाई अघि लगाएर तीनवर्ष अघि नै गरेको भए गोर्खाहरूका दुइवटा मुद्दाले अहिलेसम्म पार पाइसक्थ्यो। विमल गुरुङ तीनवर्ष दिल्लीमा बसेर गठबन्धनका दल अनि देशभरिका स्टेकहोल्डर्सलाई दिल्ली गएर केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुसित भेट्नै दिएनन्।
जिएसएसएसका अञ्जनी शर्मा भन्छन्, ‘हामीले पनि सर्वदलीय शक्ति बनाउने धेरै प्रयास गऱ्यौं तर विमल गुरुङ नै पटक्कै मानेनन्। सबै कुरा एक्लै गर्छु भन्ने मासिकता थियो विमल गुरुङको। हामीलाईसमेत कामै गर्न दिएनन्।’
सांसद विष्टले जनतालाई भनेका थिए, ‘यो काम म एक्लैले गरेर हुँदैन। मेरो हात सबै दलले बलियो बनाइदिनुपर्छ।’ विष्टको हात बलियो पार्न त परको कुरा विमलले स्टेयरिङ कमिटी नै बन्न दिएनन्।
विमल गुरुङले सङ्गठित बनेर दिल्ली आउनै नदिएको झोंकमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले छैटौं अनुसूचीको माग पहाडमा चुलाइदियो।
यसले गठबन्धनभित्रमा मेलमिलाप नरहेको स्पष्ट पारिदियो। तर कसैले पनि विमल गुरुङ नै सङ्गठित बन्न नसकेको हो भनेर खुलाएनन्। कति दलले त अहिले पनि मुख खोलेको छैन।
यस्तोमा पनि राजु विष्टले एउटा प्रयास गरेकै हुन्। तर स्टेयरिङ कमिटीको लागि विमल गुरुङले प्रतिनिधिको नाम नै नदिएपछि त्यसको पनि च्याप्टर क्लोज भयो।
सांसद विष्टले खबरम्यागजिनसित आज भने, ‘सबैलाई थाहा छ, मैले किन गठबन्धनका दलहरूलाई दिल्ली लैजान सकेको थिइनँ। म नाम लिएर कसैको मन दुखाइदिन चहान्न। त्यो बाधा हटेपछि पहोल्पल्ट आज दिल्लीमा साथीहरू लैजान सकें। भाजपाका राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीयका साथमा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री जी. किशन रेड्डी तथा गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसित आज दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्ससित सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल हुन सक्यो।’
पहिलोपल्ट पहाडका दलका प्रतिनिधिहरूसित केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले डेढ़ घण्टासम्म छुटेका ११ गोर्खा जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा प्रदान गर्ने र स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि जनताको चिरकालिक मागमाथि विस्तृत विचार-विमर्श गरिएको विष्टको जिकिर थियो।
गृह राज्यमन्त्रीले मुद्दाहरूको सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे टोलीलाई जानकारी दिएका छन्। रेड्डीले जनाएअनुसार 11 जातलाई जनजाति दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। रजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया (आरजीई)-समेतलाई गृमन्त्रालयले पत्राचार गरिसकिको छ ।
गृह राज्यमन्त्रीले भनेअसार चिकेन नेक क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको महत्त्वबारे सरकारलाई जानकारी छ।
‘केही महिनापछि सबैलाई सन्तुष्टि पार्दै यी मुद्दाहरूको समाधान हुनेछ,’ विष्टले पनि थपेका छन्।
यताबट मन घिसिङ, आर.बी. राई, प्रताप खाती, दावा पाख्रिन, बिकास राई, कल्याण देवान, महेन्द्र छेत्री, किशोर प्रधान अनि नीरज जिम्बा बैठकमा थिए। उनीहरूलाई पहाडको दुईवटा मुद्दा शीघ्र समाधान गर्ने केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री जी. किशन रेड्डीले आश्वासन दिएका छन्।
यही आश्वासन केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूले विमल गुरुङलाई बारम्बार दिइरहेका थिए। तर भाजपाले सँधै आश्वासन मात्र दिने तर पहल भने नगर्ने चाल पाएपछि विमल गुरुङ फेरि जिटिएमा नै बस्न ममतासित मिलेका छन्।
अहिले विमल गुरुङसित कुनै एजेण्डा छ भने भाजपालाई गाली गर्ने एजेण्डा मात्र छ। विमल अहिले भाजपाले केवल आश्वासन दिएर दिल्लीमा राखेको र भाजपा गोर्खाप्रति इमान्दार नरहेको भडास जनसभाहरूमा पोखिरहेका छन्।
विमलका भडासहरू सुनेर ममता व्यानर्जीले पनि भनिन्, ‘विमलले भाजपालाई चिने र छोडेर आए। किन भने भाजपाले हरेक चुनाउमा गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनेर भोट लगे, जिते तर जितेपछि गोर्खाल्याण्ड भने दिएन। म सँधै पहाडमा हारें किन भने मैले गोर्खाल्याण्ड दिन्छु भनिनँ। पिपिएस पनि भाजपाले दिँदैन। दियो भने मै दिन्छु।’
ममता व्यानर्जीसमेतले भाजपाले गोर्खालाई केवल ‘आश्वासन’ दिएको भन्दै भाजपाले ‘आश्वासन’ दिने तर काम भने नगर्ने भन्दै बङ्गालभरि विमललाई देखाउँदै प्रचार गरिरहेको बेला फेरि पहाडका गठबन्धनका दलहरूलाई केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले ‘आश्वासन’ नै दिएका छन्।
विमल भाजपाको आश्वासनले वाक्कै बनेर ममता अघि झुक्न बाध्य बनिसकेका छन्। विधानसभा चुनाउ अघि स्थायी राजनैतिक समाधान नगरेपनि पहाडका जनता र दलहरू 11 वटा जातलाई जनजातिको मर्यादा त देला भन्ने आशामा छन्।
यस्तोमा चुनाउसम्मै ‘आश्वासन’ मात्रै अघि आयो भने यसपल्ट स्पष्ट छ, पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खाले भाजपालाई विदा दिने निश्चित छ। यस्तो भयो पनि गठबन्धनका दलहरूमाथि जनताको भरोसा सँधैलाई उठ्ने पनि निश्चित छ।
पोलिटिक्समा यस्तो ‘कू’ राजनीति नगरौं